Qaboojiyaha Korantada ee Baska iyo Tababaraha Korantada, Warshad Soo Celinta Hawada Hal iyo soosaarayaasha | SONGZ
Taxanaha LMD ee qaboojiyaha baska tamarta cusub waa nooc ka mid ah saqafka hawo qaboojiye leh, oo leh hal aag soo noqosho hawo leh, iyo moodooyin kala duwan oo loo codsado basaska korontada laga bilaabo 8m ilaa 12m. Taxanaha LMD wuxuu taageeraa tikniyoolajiyad kala duwan oo ikhtiyaari ah, sida teknolojiyadda xakamaynta daruuraha, tiknoolajiyadda ka-hortagga dabacsanaanta sare, qaybta saqafka isku dhafan ee nidaamka maareynta kuleylka batariga (BTMS), tikniyoolajiyadda maareynta kuleylka gawaarida, tiknoolajiyada tamarta sare ee DC750, tikniyoolajiyadda yareynta biyaha uumiga, tikniyoolajiyadda sifaynta hawada ee baska dhexdiisa iyo kombaresarada isku-darka aluminium ee keydka u dhigta.
Taxanaha LMD, Hal Aag Soo Celinta Hawada, oo ah 8-12m E-bus
Qaab dhismeedka Qaabdhismeedka Korontada Qaaliga ah ee SONGZ (SIEMA)
Naqshadeynta qaab-dhismeedka qaabdhismeedka caqliga ah (madal SONGZ SIEMA1), oo garata nashqadda qaabdhismeedka iyo isku-darka kombaresarada, kontaroolada korantada, kondenser iyo uumiye, isku-dhafka nidaamka maareynta kuleylka iyo iwm. Naqshadeynta alaabtu waa mid hufan oo la isku halleyn karo, iyo heerka guud ee qaybaha dayactirka alaabada. gaari karaa 72%.
1. Qalabka 'Condenser and evaporator shell moduar'.
2. Qolka Kondenser qaybiyaha
3. Qolka Evaporator qaybtiisa
4. Qolka koontaroolka korantada qaybsan
5. Qolka kombaresarada qaybsan.
6. Nidaamka maaraynta kuleylka ee baytariga qaabkiisa.
Faahfaahinta Farsamada ee Baska Korantada A / C LMD Taxanaha:
8000 m3 / saac (4)
10000 m3 / saac (5)
5400 m3 / saac (6)
6000 m3 / saac (6)
LMD-III-BNDD Macluumaadka Farsamada LMD-IV-BNDD Macluumaadka Farsamada LMD-V-BNDD Macluumaadka Farsamada
LMD-VI-BNDD Macluumaadka Farsamada
1. Awoodda wax soo gelinta ee qaboojiyaha waxay la qabsan kartaa DC320-DC820V, waxayna noqon kartaa mid hooseeya illaa DC260V ka dib bilowga, iyo danab kontaroolada waa DC24V (DC20-DC28.8). Xaaladda farsamo ee qaboojiyaha taraawiilada waxay u baahan tahay in si gaar ah loogu xaqiijiyo SONGZ, maxaa yeelay habka xakamaynta noocan qaboojiyuhu wuu ka duwan yahay, iyo korantada lagu qiimeeyo ee trolleybus-ka waddamada shisheeye way ka duwan tahay.
4. Fursadaha maareynta kuleylka ee batteriga isku dhafan:
4.1. Heerkulka biyaha ka baxa ee kuleylka ahi waa 7℃-15℃, Heerkulka biyaha bixiya waa 11℃-20℃, amraya ≤10Kw, sii deynta ≤1-3Kw, kombaresarada waxay u baahan tahay inay isticmaasho kombaresarada Panasonic;
4.2. Heerkulka biyaha ka baxa ee kuleylka ahi waa 7℃-15℃, Heerkulka biyaha bixiya waa 11℃-20℃, amraya ≤10Kw, sii deynta ≤1-5Kw, kombaresarada waxay u baahan tahay inay isticmaasho kombaresarada Hitachi;
4.3. Heerkulka biyaha ka baxa ee amraya waa 7℃-15℃, Heerkulka biyaha ka baxa bixida waa 11℃-20℃, amraya ≤10Kw, sii deynta ≤3-6Kw, Emerson kombaresarada waa in la xusho.
Taxanaha LMD Hawlaha E-Bus AC Casriyayn （Ikhtiyaar）
Hawlaha aasaasiga ah ee qaboojinta, kuleylka kuleylka iyo hawo-qaadashada, sheyga ayaa sidoo kale hagaajin kara howlaha soo socda sida ku xusan shuruudaha macaamiisha iyo deegaanka:
1. Shaqada kululaynta bamka kuleylka ee heerkulka hooseeya wuxuu yaqiinsaday -15 ℃ si loo daboolo culeyska kuleylka ee gaariga oo dhan, iyo -25 ℃ hawlgalka bamka kulaylka joogto ah.
2. Waxqabadka kuleylka ee kuleylka kuleylka kuleylka ah, si loo gaaro kuleylka waxtarka sare leh ee -3 ℃ deegaanka heerkulka hooseeya.
3. Horumar hal abuur leh oo ah laba nooc oo ah iskuduwaha injineernimada, kaas oo ku guuleysan kara hawlgal deggan -35℃.
4. Soo saar hawlo cusub oo loogu talagalay baska isku dhafan, kaas oo xaqiijin kara shaqada kuleylka ee qaboojiyaha baska, oo u siiya howlaha qaboojinta baakadka baakadka gaariga, ilaaliya badbaadada batteriga, iyo kordhinta nolosha batteriga.
5. Hawlaha maaraynta kuleylka ee batteriga isku dhafan, soo saarida awoodda qaboojinta batteriga 3-10kw iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha iyadoon saameyn ku yeelanaynin saameynta qaboojinta gaariga.
6. Hawlaha nadiifinta hawada, oo ay ku jiraan afar hawlood: aruurinta boodhka electrostatic, nalka loo yaqaan 'ultraviolet light', matoor dan-dhaliye xoog leh, iyo shaandhaynta soosaarida sawir, si loo gaadho nadiifinta, ka saarista urta iyo ka-qaadista boodhka oo waxtar leh, iyo in si wax ku ool ah loo joojiyo gudbinta fayrasyada.
7. Shaqada "Xakamaynta daruuraha", xaqiiji kontoroolka fog iyo ogaanshaha, iyo hagaajinta adeegga wax soo saarka iyo awooda kormeerka iyada oo loo marayo codsi weyn oo xog ah.
8. Kuleylka kuleylka ee PTC, sida ku xusan qaabab kala duwan iyo heerkulka deegaanka, ku bilow PTC waqtiga, ka caawi kuleylka, iyo inaad ku ogaatid kuleylka heerkulka buuxa.
Taxanaha LMD E-Bus A / C Teknoolojiyada Sare:
1. Aqbal naqshada toosan, muuqaalka quruxda badan.
2. Nidaamka oo dhami wuxuu qaataa naqshad khafiif ah, hawo-mareen aan lahayn qaab-dhismeedka qolofka hoose, naqshadeynta taageereyaasha miisaanka yar, taas oo ka dhigaysa xaqiijinta nidaamka qaboojiyaha miisaanka hooseeya.
3. Shayga EMC wuxuu buuxiyaa shuruudaha GB / T 18655 heerka 3, nidaamku wuxuu qaataa naqshadaynta naqshadeynta xuquuqda lahaanshaha aqooneed ee madaxbanaan, aamin ah oo lagu kalsoonaan karo, wuxuuna sidoo kale dhaafi karaa heerarka EU.
4. Amaan iyo kalsooni, seddex heer-kululeyn iyo naqshadeynta ka hortagga dabka, danab sare oo ka shaqeynaya isku xirnaanta kahortagga
5. La qabsiga tiknoolajiyada beddelaadda soo noqnoqoshada, alaabooyinka dhammaadka-sarreeya waxay ku qalabeeysan yihiin balaadhin elektaroonig ah, oo leh xakameyn sax ah, keydinta tamarta iyo raaxo leh.
6. Ku-qaadashada tignoolajiyada jilitaanka CFD nashqadda.
Hore: Qaboojiyaha Korantada ee Minibus koronto iyo Tababar
Xiga: Qaboojiyaha Korantada ee Baska iyo Tababaraha Korantada, Soo Celinta Hawada Labaad